अलैँचीमा रोगको सङ्क्रमण, उत्पादन गत वर्षभन्दा आधा कम, विकल्प खोज्दै किसान
भदौ २४, इलाम । राम्रो आम्दानी लिइरहेको अलैँची पछिल्लो समय फेरि मर्न थालेपछि किसान चिन्तित देखिएका छन् । अलैँचीमा फेरि रोग लागेर राम्रो फल दिन छाडेपछि किसान चिन्नित बन्न पुगेका हुन् ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्कमा नेपालबाट विदेश निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा अलैँची दोस्रो स्थानमा छ । नेपालबाट वर्षेनी रू. साढे चार अर्बको अलैँची विदेश निर्यात भइरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । केन्द्रका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालबाट ७६ लाख ६० हजार ६७७ किलो अलैँची निकासी भएको छ । यसबाट रू. चार अर्ब ५० करोड ६३ लाख ४६ हजार आम्दानी भएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशको १७ हजार दुई हेक्टरमा अलैँचीखेती भइरहेकामा १२ हजार आठ हेक्टरबाट उत्पादन भइरहेको छ । रासस
‘मुलुक मोबिलाइजेशन पेश्कीको बन्धक हुन हुँदैन’[२०७६ फागुन, ४]
९०० मेवाको अरुण तेस्रोको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन [२०७६ फागुन, ३]
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरद्वारा १अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन [२०७६ फागुन, १]
पर्यटन प्रवर्द्धनको पर्खाइमा रूपाकोट[२०७६ माघ, २९]
अरुणको सतीघाटमा फेरी सञ्चालन[२०७६ माघ, २८]